सचेत हुनुपर्ने भनिए पनि स्पष्ट कारवाहीको व्यवस्था छैन – जीवनकुमार श्रेष्ठ (महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रवक्ता) | Kendrabindu Nepal Online News
32416405 987742 7496451 23932212
सचेत हुनुपर्ने भनिए पनि स्पष्ट कारवाहीको व्यवस्था छैन – जीवनकुमार श्रेष्ठ (महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रवक्ता)
५ पुष २०७६, शनिबार १८:१५
काठमाडौं । हरेक दिन साना ठूला दुर्घटना भइरहेका हुन्छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र औसत रूपमा दैनिक ३५ दुर्घटना हुने गरेका छन् । दुर्घटना मानवीय, उपकरण, सडक र मौसमका कारण बढी हुने गरेका छन् ।
उपत्यकाको सडक धेरै व्यस्त सडकभित्र पर्छन् । व्यस्त सडकको व्यवस्थापनमा टेवा पुगोस् भनेर ठाउँठाउँमा आकाशे पुल, जेब्रा क्रसिङजस्ता वैकल्पिक उपाय पनि अपनाइएको छ । तर जहाँ पायो त्यहींबाट पैदलयात्रीले बाटो काट्दा धेरै समस्या हुने तथा पैदलयात्रीलाई कारवाही गर्ने कानून नहुँदा थप समस्या भएको छ । यिनै मूलभूत विषयलाई ५ प्रश्नमा केन्द्रित गरी केन्द्रविन्दु अनलाइनका उपसम्पादक विवश कुलुङले महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक जीवकुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन् ।
सडकमा जहाँ पायो त्यहींबाट पैदलयात्रीले सडक पार गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा कस्तो समस्या हुन सक्छ ?
सवारी व्यवस्थापनमा सहजताको लागि त्यहीअनुसारको व्यवस्था गरिएको छ । कतै जेव्रा क्रसिङ, पुल र अन्डर ग्राउण्ड बाटोको व्यवस्था गरिएको छ, तर पैदलयात्रीले दिएको सुविधा तथा उपलब्ध स्रोतको प्रयोग नगरी बाटो काट्दा जाम हुने, दुर्घटना हुनेदेखि पैदलयात्री अङ्गभङ्ग हुने तथा पैदलयात्रीको ज्यान जानेसम्मको समस्या हुनसक्छ ।
अहिलेसम्मको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पैदलयात्रीको कारण कति दुर्घटना हुने गरेको छ ?
पैदलयात्रीको लापरवाहीका कारण काठमाडौं उपत्यकामा मात्र चालु आर्थिक वर्षमा एउटा दुर्घटना भएको छ । यस्तै गत आर्थिक वर्षमा ३, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ४, आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा ११, आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा १३, आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा १८, आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा २० र आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा ८५ वटा दुर्घटना पैदल यात्रीका कारण भएका छन् । यो भनेको हाम्रो अभिलेखमा भएको तथ्याङ्क हो । वास्तविक संख्या यसभन्दा बढी पनि हुनसक्छ ।
जहाँ पायो त्यहाँबाट बटुवाले सडक पार गर्दा समस्या त छँदै छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ ?
हामीले त्यसअनुसारको टाफिक जनशक्ति परिचलन गरेका छौँ । जनचेतना बढाउने प्रयास गरिरहेका छौ । तर पैदलयात्रीले पनि के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरूले पुल र जेव्राक्रसिङबाट बाटो काट्दा त उनीहरूलाई नै राम्रो कुरा हो नि । उनीहरूकै ज्यान बाँच्ने हो नि । यसरी सचेत भइदिने हो भने एक त दुर्घटना हँुदैन, भइहाले पनि ज्यान जाने जोखिम कम हुन्छ ।
जेव्रा क्रसिङ भएको स्थानमा त्यसको प्रयोग नगरी सडक पार गर्ने पैदलयात्रीलाई कस्तो कारवाही हुन्छ ?
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १३६ मा सडकपेटीबाट हिँड्नुपर्ने, पेटी नभएको सडकमा हिँड्दा किनारा च्यापेर हिड्नुपर्छ भनेर उल्लेख छ भने दफा १३७ मा चाहिँ बाटो काट्दा जेब्रा क्रसिङबाट मात्र बाटो काट्नुपर्छ भनेर उल्लेख छ । सोही अनुसार हामीले सचेत गराउने र आग्रह गराउने काम गर्छाैं । विभिन्न अनुशिक्षण पनि चलाएका छौं । तर पैदलयात्रीलाई सजाय हुने विषयमा ऐनले उल्लेख गरेको छैन ।
सजायको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ कि छैन ।
कानुनमा व्यवस्था भएमा राम्रो । तर सबभन्दा ठूलो समस्या त पैदलयात्री नै हो नि । मानौं अहिले २०० जरिवाना गरौं तिरेर जाला तर दुर्घटना भयो भने त उसको हातखुट्टा भाँचिनेदेखि ज्यान जाने जोखिमसम्म हुन्छ । हामीले त जरिवानाभन्दा पनि कुरा बुझाउन जरुरी छ । उसले तिरेको जरिवाना राजस्वमा जाला । उसको मन खल्लो होला । तर उसको ज्यानसँग सम्बन्धित कुरा हो नि । ज्यानभन्दा ठूलो कुरा अरु छैन भनेर बुझाउन सकियो भने सजायको व्यवस्था किन चाहियो र ?
Prevइराकमा जारी आन्दोलनमा चार सय ८५ जना मारिए
कर्णाली करिडोरकाे काम धमाधमदेखि कान्छीमायाकाे ह्याट्रिकसम्म (भिडियाेसहित)Next
उक्लिएको मान्छेले जीवनका उकालीहरु चढ्न सिकाउँछ : भक्तराज रन्जित
हाम्रो आन्दोलन अख्तियारकै सहयोगका लागि हो- प्रकाशचन्द्र परियार
चिकित्सा शिक्षा आयोगको गेटमै अनशन बसेपछि पक्कै केही हुन्छ : विजय थापा (नेता नेवि संघ)
विद्यार्थीको प्रतिभा प्रष्फुटन गर्न प्राविधिक शिक्षा जरुरी : पुरुषोत्तम महर्जन (प्रिन्सिपल, सेन्ट लरेन्स कलेज)
पार्टीको निर्देशनले हामी धर्मसंकटमा परेका छौं – वसुन्धरा हुमागाईं (नेकपा सांसद, प्रदेश ३)
पार्टीभित्र बढेको गुटबन्दीले कसैलाई फाइदा गर्दैन : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष (भिडियो सहित)